चर्चित युवा नेतृ रञ्जु दर्शनाले गरिन विवाह, अबको योजना राजनीति कि व्यवसाय ? – Nepal Tube Australia
Home ∕ Nepal ∕ चर्चित युवा नेतृ रञ्जु दर्शनाले गरिन विवाह, अबको योजना राजनीति कि व्यवसाय ?
nepaltube Thursday, 2022 May 05 / 1:42 pm
काठमाडौं । विवेकशील साझा पार्टीकी बागमती प्रदेशकी पूर्वसंयोजक समेत रहेकी चर्चित नेतृ रञ्जु दर्शना विवाह बन्धनमा बाँधिनुभएको छ । दर्शनाले बुधबार किशु कुइँकेलसँग विवाह गर्नुभएको हो ।
गत फागुनमा दर्शना र कुइँकेलबीच इन्गेजमेन्ट भएको थियो । झण्डै साढे चार वर्ष विवेकशील साझामा आबद्ध भएकी दर्शन पाँच वर्ष अघिको स्थानीय तह निर्वाचनदेखी निरन्तर चर्चामा थिइन । २०७४ को स्थानीय चुनावमा दर्शना काठमाडौं महानगरको मेयरमा उठेर तेश्रो बनेकी थिइन ।
रविन्द्र मिश्र नेतृत्वको साझा पार्टी र विवेकशील बीच एकिकरण भएर विवेकशील साझा पार्टी बनेपछि चुलिएको विवादका कारण दर्शनाले पार्टीबाट राजीनामा दिएकी थिइन् । उनी अहिले कुनै पनि राजनीतिक अभियानमा जोडिएकी छैनन । विवाहपछिको योजना बारे समेत केही खुलाउनुभएको छैन ।
ट्याग : #काठमाडौं महानगरको मेयर, #किशु कुइँकेल, #रञ्जु दर्शना, #रविन्द्र मिश्र, #विवेकशील साझा पार्टी
‘रिभेन्ज पोर्न’ को शिकार बन्दै नेपाली युवती, को–को छन निशानामा ?